ခေတ်နှင့်အညီတိုးတက်လာသည်, ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်, ပိုပြီးစွမ်းအင်ချွေတာ, ဆူညံသံကိုလျှော့ချ, ညစ်ညမ်းစေသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချပါ, မျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌, vacuum plating သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုတွင်အသစ်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်လာသည်။ သာမန် electroplating နှင့်မတူပါ, vacuum electroplating သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုလိုက်ဖက်သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, vacuum electroplating သည်သာမန် electroplating ဖြင့်မရနိုင်သောကောင်းသောတောက်ပမှုနှင့်အတူ black effect ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။.
Vacuum electroplating သည်အခြေခံအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ကိုလေဟာနယ်အောက်တွင်ထိုးသွင်းသည်, အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့သည်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုထိသည်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ကွဲထွက်နေသောမော်လီကျူးများကိုယူနီဖောင်းနှင့်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်လွှာအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြင့်စုပ်ယူသည်။, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်, ထို့ကြောင့်လေဟာနယ်ကို electroplating လုပ်ငန်းစဉ်၌ ဦး တည်သောအရာများ၏အသုံးချမှုများသည်အဘယ်နည်း??ဒီနေ့, အယ်ဒီတာကသင့်ကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်.
ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်, လေ ၀ င်လေ ၀ င်လေ ၀ င်လေထွက်ပစ်မှတ်တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်:
(1) သတ္တုများ, သတ္တုစပ်များသို့မဟုတ် insulator တွင်လည်းပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ပစ္စည်းများအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်.
(2) သင့်တော်သောသတ်မှတ်အခြေအနေများအောက်တွင်, တူညီသောဖွဲ့စည်းမှုရှိသောပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ကိုမျိုးစုံနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပစ်မှတ်များမှပြုလုပ်နိုင်သည်.
(3) လေထုထဲသို့အောက်ဆီဂျင်သို့မဟုတ်အခြားတက်ကြွသောဓာတ်ငွေ့များထည့်ခြင်းဖြင့်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများ၏အရောအနှောသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်.
(4) ပစ်မှတ် input current နှင့် sputtering time ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်, ၎င်းသည်တိကျသောရုပ်ရှင်အထူရရှိရန်လွယ်ကူသည်.
(5) အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ၎င်းသည်ကြီးမားသောဧရိယာယူနီဖောင်းဇာတ်ကားများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်.
(6) ပြန့်ကျဲနေသောအမှုန်များသည်ဆွဲငင်အားကြောင့်နီးပါးမထိခိုက်ပါ, ပစ်မှတ်နှင့်အလွှာ၏နေရာများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီစဉ်နိုင်သည်.
(7) ရုပ်ရှင်နှင့်အလွှာအကြားကော်စေးခိုင်သည်ထက်ပိုသည် 10 ယေဘူယျအားဖြင့်အခိုးငွေ့စုပ်ထုတ်သည့်ရုပ်ရှင်ထက်အဆများစွာသာလွန်သည်, ပြန့်ကျဲနေသောအမှုန်များသည်စွမ်းအင်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ၎င်းတို့သည်မာကျောပြီးထူထပ်သောရုပ်ရှင်ကိုရရှိရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်၌ဖလင်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ပျံ့နှံ့လိမ့်မည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, မြင့်မားသောစွမ်းအင်သည်အလွှာကိုအောက်အပူချိန်တွင် Crystallized film ကိုသာရနိုင်သည်.
(8) ဖလင်၏ကန ဦး အဆင့်တွင် nucleation သိပ်သည်းဆမြင့်မားသည်, 10nm အောက်တွင်အလွန်ပါးလွှာသောစဉ်ဆက်မပြတ်ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
(10) ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုပုံစံမျိုးစုံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်, ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်စက်၏အထူးဒီဇိုင်းနှင့်.
အထက်ပါစာသည်လူတိုင်းအတွက်အယ်ဒီတာအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်. လေ ၀ င်လေထွက်အားဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများအသုံးချခြင်း၏ထူးခြားချက်အချို့. နည်းပညာထုတ်ကုန်အသစ်အနေနှင့်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများ၏အသွင်အပြင်သည်မျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းပညာတွင်အဓိကတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အကြို: cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ၏အားသာချက်များ
နောက်တစ်ခု: သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ် sputtering ပစ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး